သတိုး: နှစ်ဦး အမွန်
Posted by သတိုး at 5:53 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 24, 2011 at 6:37 PM
Merry Christmas & Happy New Year....ပါ အကို....
lwin December 24, 2011 at 7:17 PM
Wish youavery happy new year...!
မြတ်မွန် December 24, 2011 at 8:49 PM
ပေါ်ရွှင်ဖွယ် နှစ်ဦးအမွန် ဖြစ်ပါစေ ကိုသတိုး..:))
SHWE ZIN U December 24, 2011 at 10:14 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 25, 2011 at 9:26 AM
မကြာခင်ရောက်လာတော့မဲ့နှစ်သစ်ဟာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်များကိုဆောင်ကျဉ်းပေးလာတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်။
ဝတ္ထုတိုတွေကို အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးထုတ်နိုင်ပြီး ရေးသလောက်လည်း ဖတ်လို့ကောင်းနေတာပါဘဲ။
ခုပိုစ့်လေးကိုတော့လူငယ်တို့ရဲ့ ပျော်စရာသဘာဝအကြောင်းကို ကြည်နူးစိတ်လေးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်
ဝတ္ထုတိုအရေးကောင်းလို့လည်း နှစ်သက်အားကျစိတ် ဖြစ်ရပါတယ်ရှင်..
ချစ်ကြည်အေး December 25, 2011 at 12:33 PM
Merry X'mas & Happy New Year ပါ သတိုးရေ....း)
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) December 26, 2011 at 3:15 AM
ဥာဏက သတိုးလား။ အခုလောက်ဆို အဆင်ပြေနေကြရောပေါ့။း)
မြသွေးနီ December 26, 2011 at 5:01 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပို့စ်လေးကို ခံစားဖတ်ရှုရင်း ကိုယ်ပါပျော်လာမိပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပြီး နှစ်သစ်မှာ စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ ကိုသတိုးရေ...။
mstint December 27, 2011 at 6:39 PM
တီတင့်က အခုလို ပျော်ရွှင်မှုလေးနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့
ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ပိုသဘောကျတယ် သတိုးရေ။